Pregnancy Ngesondo Izibonelelo: Njani Ngesondo Ngexesha Pregnancy ilungileyo kuba Impilo Yakho kwaye Yakho Baby ke okulindeleyo
Wena umlingane wakho abe anayithathela kokuba plenty bedroom ka-iiseshoni xa ufuna baba ukuzama kumitha. Kodwa ngoku ukuba ukhe ubene pregnant, imizwa yakho ngakulo ngesondo alinakukhuselwa iselwa ngoko ke kakhulu. Kutheni ekhuselekileyo? Kuyenzeka ukuba yenze comfortably? Kwaye ngaphezu kwazo zonke, nkqu oko kuya kukunceda kakhulu ukuba ukhe ubene ndinovelwano ukudinwa kwaye baya ngenye nje conk ngaphandle phambi kwexesha. Impendulo yokuqala u-ngu-a resounding ewe. (Njengoko kuba wesithathu, kulungile, ukuba omnye ke? phezulu kuwe.) Njengoko ixesha elide njengoko nisolko ndinovelwano phezulu kuba kubhaliwe kwaye yakho doctor hasn ukuba ndinixelele ngenye indlela, ke ngaphezu kulungile ukuba wabelane ngesondo kulo lonke yakho yonke pregnancy. Yintoni ngaphezulu, ngesondo ngexesha pregnancy iza kunye abanye pretty sweet perks. Nazi isibhozo akufuneki pregnancy ngesondo ukuba nje ingenza ixesha lakho kwi-umandlalo nkqu ngcono. Ukulungele ukuhlasela raring ukuya kodwa nangona kunjalo kuba ngokungathandabuzekiyo ukuba ngesondo ayikwazi iingcaphephe kwenzakalisa yakho baby.
Ngaphandle kokuba yakho practitioner ikuxelela ukuba kukho isizathu hlala ngaphandle engxoweni, ngesondo ngexesha pregnancy ngu ngokugqibeleleyo ekhuselekileyo. Ngoko ke, musa worry uphumelele khange kwenzakalisa i-baby ngayo nayiphi na indlela, okanye yandisa umngcipheko kuba usulelo (xa umlingane wakho akuthethi ukuba unayo i-STD). Kwaye ekubeni i-ufikelelo kwincam yoluvo yesondo akuthethi ukuba phezulu chances kuba miscarriage okanye preterm kusebenza. Surging hormones unako ukuthumela wakho ngesondo drive kakhulu kunesiqhelo. (Nangona ukuba ukhe ubene nje hayi ndinovelwano ke, ukuba ke eqhelekileyo kakhulu.) Nkqu ngcono. Zonke ukuba isithuba igazi yokuhamba kwemali yakho vulva unako heighten, ukujikeleza, ngoko ke ungakwazi amava ngakumbi ngamandla sensations kwaye orgasms. Ungafuna nkqu fumana kumnandi lendawo ukuba ufuna asikwazanga nkqu nokwazi kwenu ephilile. Ekubeni ngokupheleleyo elated malunga yakho impending bundle mhlawumbi hasn khange lumisiwe kwenu ukususela ngamanye amaxesha ndinovelwano oxhalabileyo, weepy okanye stressed (imibulelo, hormones.). Pregnancy kusenokuba i-yeemvakalelo zakho roller coaster, kodwa ngesondo kusenokuba enkulu, indlela decompress kwaye nje kuba mzuzu. Dibanisa, oxytocin surge ukuba iza xa ufikelelo kwincam yoluvo yesondo boosts zimvo lomgaqo-uthando kwaye ulonwabo, ukwenza uziva nkqu kukufutshane ukuba umlingane wakho. Uqonde, okulindeleyo babe earn commissions ukususela inqwelo amakhonkco iqukiwe ekweli phepha. Hayi kuphela iya pregnancy ngesondo hayi kwenzakalisa yakho nje omnye, kodwa abaninzi abo perks ukuba kuza indlela yakho iya kwenza izinto ezilungileyo kuba yakho baby kakhulu. Umzekelo, itshisa ezimbalwa ezingaphezulu calories unako ukwenza oko kancinci kuba lula ukuba uphephe gaining kakhulu kakhulu umlinganiselo ngexesha pregnancy, stronger immune indlela kungasinceda shield kwayo ukususela iziphumo a yingqele okanye i-flu. Onjalo uya kuba yeemvakalelo zakho izibonelelo. Ngaphezulu okulungileyo uvakalelo kuwe kuthetha ukuba yakho baby ngu eboniswe kwi abangaphantsi usamuel hormones njenge cortisol. Kwaye ukuba kunako dibanisa nefuthe kwindlela yakho abancinane omnye ke zophuhliso kunye phambi kwaye emva kokuzalwa. Fact: Yakho lokukhula isisu ibe ekugqibeleni yenza abanye oyithandayo izikhundla pretty uncomfortable.
Hayi worry, nangona
Zisekhona plenty iindlela ezininzi get ngayo kwi ukuba uza bazive ezilungileyo kuba zombini wena umlingane wakho. Abanye kwabo babekho entsha kuwe okuthetha ukuba pregnancy ngesondo kusenokuba ngumsebenzi fun ithuba name. Ungafuna ukuzama pregnancy-eyobuhlobo ngesondo izikhundla njenge icala-lwazi, umfazi iphezulu, kwaye balance ingeniso ukuba ibe uninzi appealing. Kodwa uzive ukhululekile ukuba afumane kunye umlingane wakho ukubona yintoni enye into isebenza. Njengoko ixesha elide njengoko nisolko ethambileyo, into ke elifanelekileyo umdlalo. Nje uphephe ethiwe kwindlela yakho emva kwithuba elide kakhulu ngexesha. Ekubeni i-ufikelelo kwincam yoluvo yesondo spurs yakho uterus ukuba isivumelwano. Ngaphandle kokuba nisolko nearing i-tail-isiphelo sakho pregnancy kwaye umzimba wakho lilungile ukuba begin i-birthing nkqubo, ezi contractions aren ukuba yomelele ngokwaneleyo ukwenza kwakho nokungena kusebenza. Kodwa xa yakho baby lugqiba ukuba ngu-malunga kuhamba ixesha, romp kwi-ingxowa zibe nako uncedo yiya zinto noku (nangona ayithethi ukuba rhoqo, ngoko ke musa kuba disappointed ukuba akukho nto kwenzeka). Kodwa ukuba uvukile kuba ngesondo kwi iveki marko, apho ke, akukho sizathu na ukuba kuya kuba oko. Nomdla pelvic floor unako ukunceda *** umzimba wakho kuba zombini childbirth kwaye imali ukuze afike emva koko. Kwaye orgasms ziindleko pretty fun indlela uncedo tone ukuba indawo. Kuba nangakumbi a workout, zama ukwenza Kegels ngexesha ngesondo. Uzaku pump phezulu abo muscles nangakumbi kwaye kusenokwenzeka ukuba phezulu ukuthanda ifekta kuba zombini kuni. Ngoko ke njengoko ixesha elide njengoko nisolko ndinovelwano phezulu kuba kubhaliwe, get uxakekile. Ngaphandle kokuba kugqirha wakho ukuxelela ukuba ngenye indlela, ukwabelana ngesondo ngexesha pregnancy ayi nje ngokupheleleyo ekhuselekileyo, ke ilungile kuba wena, iqabane lakho kwaye nkqu yakho baby. Kwaye ukuba ukhe imibuzo okanye yethutyana nangaliphi na incopho ngexesha lakho pregnancy, kuzizisa phezulu neqabane lakho lezempilo wekhredithi ukucwangcisa engqondweni yakho ngalo wawuphungula. Ukususela okulindeleyo editorial iqela kwaye Heidi Markoff, umbhali okulindeleyo Xa nisolko Ilindele. Impilo ulwazi ngale ndawo lusekelwe peer-wahlaziya zonyango incwadi egcina ii akhawuti kwaye highly respected impilo organizations kwaye amaziko kuquka i-american College of Obstetricians kwaye Gynecologists, Centers kuba Isifo Ulawulo nothintelo kwaye i-american Academy of Pediatrics, ngokunjalo njengoko okulindeleyo iincwadi yi-Heidi Markoff. I-zemfundo impilo isiqulatho kwi okulindeleyo ngu wahlaziya ngokuthi iqela leengcali zethu ingcaphephe ukuba abe phezulu umhla kwaye ngokungqinelana ne-umhla ubungqina esekelwe zonyango ulwazi kwaye yamkelwe impilo guidelines, kuquka medically wahlaziya okulindeleyo iincwadi yi-Heidi Markoff. Le ndawo uyavumelana kunye Honchoed esezantsi kuba trustworthy impilo ulwazi. Oku zemfundo isiqulatho ayikho lonyango okanye diagnostic ingcebiso. Sebenzisa le site ngu ngokulawulwa ethu ngokwemimiselo sebenzisa kwaye umgaqo-nkqubo wabucala.
FREE ISEMTHETHWENI INGCEBISO KWI INTERNET